Ndi mmadu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ndi mmadu
Ihe bara uru, na ma physalis dị njọ
Ọtụtụ ndị anụwo ọdịbendị dị otú a dị ka physalis. Igbe na-acha ọbara ọbara, mmanụ ọkụ, nke mkpụrụ osisi ahụ na-ezo - ihe mbụ ị na-echeta. mgbe ha na-ekwu banyere Physalis. Ọ bụ nke ezinụlọ nightshade. Osisi osisi a na-eto eto ruru 50-100 cm n'ịdị elu, na-emepụta mkpụrụ osisi na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha, nke na-eto site na axils nke epupụta oge ntoju na August.
Kedu ihe iji digitalis mee maka ahụike mmadụ?
Digitalis (Digitális) bụ ahịhịa nke ezinụlọ plantain. Kesaa na Mediterranean, dị n'Esia na North Africa. Ihe omimi nke dijitalis Ihe omuma nke dijitalis juputara na ihe ndi ozo nke organic acho, nke, ya na manu bubo gidescoside. Osisi nwere ise dị otú ahụ ogige: digitoxigenin, gitoksigenin, gitloksigenin, digoxigenin na diginigenin.
Njirimara ọgwụ nke plectrantus aromatic: eji na nkà mmụta ọgwụ na omenala
Ezi ọka (sporiferous, Mint) bụ ahịhịa ogwu nke ezinụlọ Yasnotkovyh. Na Russia, sitere na South Africa, e kesara ya n'Australia. Plektranthus Aromatic: Chemical Composition N'ime ihe ndị dị n'ime osisi, glycosides, protein, carbohydrates na ọbụna alkaloids nwere ike ịmata.
Njirimara ọgwụgwọ nke cloves, karịa osisi bara ezigbo uru
Ihe ka ọtụtụ n'ime anyị maara cloves dị ka ihe na-esi ísì ụtọ. Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole maara banyere ọgwụ ọgwụ ndị dị na ose ahụ, nke bụ mkpụrụ osisi a kpụkọrọ achawa nke a kụrụ akpaghị, nke yiri ka ọ na-adị obere. Ọ na-apụta na ọgwụ n'ọtụtụ mba ebutela oge ochie iji cloves maka ọgwụgwọ.
Ihe omimi na ojiji nke oregano
Oregano bụ osisi herbaceous perennial nke jupụtara ebe niile n'ụwa. Utu mmadu ndi mmadu na-achoputa obosara nke glades, oke ohia, oke ohia na ebe ohia. N'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ, a na-azụ oregano maka ebumnuche nke itinyekwu ngwa na àgwà dị iche iche. Tinyere ihe a choro maka osisi a, ihe di egwu ya, o di iche iche na akwukwo ahihia di iche iche nke ihe omuma bara uru.
Epekere Potentilla: uru bara uru, ojiji na contraindications
Epeepe Potentilla bụ osisi na-adịghị ahụkebe. A na - achọta ya naanị n'ime ọhịa. Nke a na osisi bụ nke ezinụlọ Rosy, genus Potentilla. N'ime ndị mmadụ a na-akpọ ya pyatipalnik, pyatipal, mgbidi pyatipe. Osisi Perennial Potentilla toro elu site na 8 ruo 25 cm.
Kedu uru pasili, ngwugwu na ọgwụ ọgwụ nke osisi?
Pasili bụ obere biennial osisi nke bụ onye òtù nzuzo nke ezinụlọ. Ọdịbendị nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ọcha na-acha odo odo ma ọ bụ edo edo-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na akwụkwọ okpukpu abụọ ma ọ bụ tri-pediferous. A na-ewere pasili ala nnabata dị n'ụsọ oké osimiri Mediterranean. A na-eto pasili na Europe, ma e wezụga Scandinavia.
Ojiji nke horseradish: uru na nsogbu na ahụ ike
Horseradish - perennial nwere mgbọrọgwụ siri ike, nke a na-eri dị ka ihe na-esi ose. Horseradish bụ osisi na-ewu ewu na-emepụta ihe, a na-eji akwụkwọ ya eme ihe na ichebe na mkpụrụ osisi pickling maka oyi. Tinye osisi na maka ọgwụ. Na chemical mejupụtara na kalori horseradish Nso vitamin na-abụghị naanị ẹdude ke horseradish!
The kpakpando Njirimara nke ọcha mushrooms
Ma eleghị anya, Ceps bụ anụ oriri kachasị mma maka ọtụtụ ndị na-akụ anụ. Enwere ike ịkpọ ya eze nke mushrooms, n'ihi na e ji ya mara mma, ọ bụghị site na ọdịdị mara mma ya, kamakwa site n'àgwà ya dị oke ụtọ, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ihe oriri maka ọtụtụ efere. Ọzọkwa, a na-eji ero ọcha dị iche iche mara ọtụtụ ihe bara uru, nke a ga-atụle n'okpuru ebe a.
Boletus bara uru
A na-ewetara anyị oke ọhịa dị iche iche n'oge oge okpomọkụ n'oge mgbụsị akwụkwọ dị ka ihe onyinye n'ụdị mushrooms mara mma - bọta. Ha kwesiri ka ndi mmadu huru "ichu nta" maka uto ha magburu onwe ha. Ngwá egwu Mashroom mushrooms nwetara aha ha n'ihi ejiji mmanu okpu.
Ihe bara uru maka nwoke cumin black, ojiji nke cumin na mmanu ya na ogwu
Ihe oriri na-esi nri nwere esters na ihe ndị ọzọ na-esi ísì ụtọ. Anyị na-enye gị cumin ojii. Cumin cine bụ osisi na-eche nche nke ọma, uru ya bara uru, ọ bụ ezie na e nwere contraindications iji. A na - amata ọgwụ ndị e ji mara cumin cine mara kemgbe oge ochie. Ị ma?
Ngwurugwu bara uru ma na-agwọ ọrịa nke chervil
A maara Chervil na oge anyị kemgbe oge ochie ma ha akpọ ya snacks, karbel, kupyr. A na-eji ya na nri na ihe ngwọta. Taa, a ka na-eji osisi ahụ eme ihe na nkà mmụta ọgwụ na nri, ma uru ya bara uru achọpụtala na mpaghara ndị ọzọ. Chervil (kupyr): ihe ngwongwo chemical na ihe bara uru nke osisi Chervil bu ihe a na-ahu anya n'etiti osisi ndi ozo.
Medicinal properties na contraindications nke sage (salvia) nutmeg
Sage bụ ahịhịa nke a ma ama maka ọgwụgwọ ya kemgbe oge ochie. Hippocrates kwuru ihe bara uru ya n'ihe odide ya. Echeghị sage nutmeg na nkà mmụta ọgwụ n'oge a. Ihe ndi ozo site na akwukwo ogwu a na-eme ka ihe omimi nke aru na iku ume. Na cosmetology, a na-ejikarị ya eme ihe dị ka onye na-eme ihe na-egbu egbu ma na-arụ ọrụ.
Uru nke ọgwụ herbs: ọgwụ Njirimara nke sage na contraindications
Aha nke osisi sage na Latin dị ka salvia "salvere", nke pụtara - ịdị mma. Ezigbo Hippocrates kwuru maka salvia na-asọpụrụ "ahịhịa dị nsọ," ndị Gris oge ochie kwukwara na ọ bụ osisi na-emeri ọnwụ. Salvia (sage) nwere ọtụtụ ụdị, ọ dịghị mfe ịmata ọdịiche nke onye ọka bụ ọgwụ.
Chokeberry ọgwụgwọ ọgwụ na contraindications
Aronia bụ nwa-fruited, ọ bụkwa nwa ash-fruited ash - ọ bụ shrub ma ọ bụ osisi na-esi ísì ụtọ-utoojoo tomato, bara uru na ya Njirimara. Ihe ndi mara mma nke Chernoplodka, n'agbanyeghi ihe di iche iche bara uru, di na nso nso, nani ihe dika afo ise gara aga, ma obu ndi agha a ka ha buru ibu n'umu ndi ndu Russia bu Ivan Michurin.
Rowan uhie bara uru Njirimara na contraindications
Red rowan, uru nke ike ya, nkwenye na nhụsianya dị egwu site na iji ya eme ihe amarala ihe a kpọrọ mmadụ ruo ọtụtụ puku afọ. Àgwà ndị dị iche iche nke ugwu ash nyere ya ebe pụrụ iche na nkà mmụta ọgwụ, nri na nkà mmụta mbara igwe. Redan na-acha ọbara ọbara nọgidere na-adọrọ mmasị ma na-enwe mmasị na ya.
Ihe bara uru ma di egwu nke lemon
Lemọn - osisi nke gọọmentị Citrus. O yiri ka ọ bụ n'ihi ngwakọ ngwongwo, ma ruo ogologo oge, ọ malitere dịka ụdị dị iche iche, ọ bụ nanị mgbe ahụ ka ọ na-arụ n'ụlọ ma ghọọ ubi omenala mara mma (na South ma ọ bụ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia). Taa osisi a amaghị na ala na-eto eto.
Ihe na-agwọ ọrịa nke mmanụ aṅụ, otú esi etinye ma na-echekwa mmanụ aṅụ si na ugu
Akwukwo mmanu ocha, nke a mara maka ihe bara uru, bu otu n'ime ihe omimi nke ndi ozo nke Caucasus. Ọ ghọrọ ụdị ihe nnọchianya nke ahụ ike na ume anụ ahụ. Taa, ọtụtụ ndị na-alaghachi na isi, na-eji ngwaahịa a maka ọgwụgwọ. Ị ma? Na United States, ugu mmanụ aṅụ na-atọ ụtọ sweetcorn na cocktails.
Ledum doo marsh: eji, ọgwụ Njirimara na contraindications
Marsh Labrador tii - osisi na-egbu egbu nke ahịhịa ezinụlọ nke heather. Ledum na-etolite na Europe, North America na Asia. Osisi ahụ nwere nnukwu ohia na-esi ike, nke ruru ebe dị elu karịa 120 centimeters. Na ísì nke ọhịa rosemary bushes yiri yiri isi nke camphor.
Gịnị bụ laurel bara uru: ihe mejupụtara ọgwụ na ọgwụ ọgwụ nke akwukwo akwukwo
Na kichin ọ bụla, e nwere akpa nke epupụta mmiri akọrọ. Ọfụma a maara nke ọma nwere ọtụtụ ngwa. Akwukwo akwukwo nwere ihe omuma ihe bara uru ma nwee ike inye aka idi nsogbu oria na ihe ndi ocha, ma site na ozo dika o di mkpa iji tinye aka na ntughari aka.